Ogaden News Agency (ONA) – Ninkii noolow maxaa aragti kuu laaban – Maantana ma Itobiyanimada iibsadaa!! By Xaji Maxamad
Ninkii noolow maxaa aragti kuu laaban – Maantana ma Itobiyanimada iibsadaa!! By Xaji Maxamad
Waxaa mudooyinkan danbe aduunka ku soo biiray qisooyin lalayaabo, iyo hadalo lalayabo iyo dhaqamo cusub. Waxaa ka mid ah oo shacabka S.Ogaadeeniya ay is waydiinayaan oy faalaynteeda iyo falanqaynteeda hadal hayaan qorshaha cusub ee gumeysiga Itoobiya iyo adeegayaashiisu ay soo hor dhigeen dhawaan markay magaalada London u yimaadeen waxay ku sheegeen Biya-xidheen Itobiya ay ka dhisayso wabiga Neel (Nile River). Waxay aad ula yaabeen dhiiranaanta lala soo aaday boobka iyo dhaca xoolaha shacab Soomaliyeed ee qurbaha ku nool.
Waxay la yaabeen in la yidhaahdo waxad keentaan maalkii lagu dhisi lahaa biyaxidheen laga dhisayo galbeedka Itobiya iyo meel aanay waligoodba maqlin iyadoo shacabka Somaliyeed ee Ogaadeenya inkastoo aanay weli ka hoos bixin heeryada gumeysiga, hadana aan waligood aanay marana ogalaanin raalina ka noqon inuu gumeysig soo caga dhigto dhulkooda, wax dhaqaale wadaag ah ama xidhiidh kale ahna uusan waligoodba dhexmarin.
Waxaan soo marnay sheekooyin badan oo taxane ahaa oo maalin walba mid la’inoo keenayay. Waxaan maqli jirnay kolba eray cusub oo macno cusub wata oo Itobiya ay hantida yaree shacabkeena ay ku boobto. Maanta waxaa aad loola yaaaabay erayada iyo luuqada cusub ee gumeyisgu la soo baxay. Waxaa la yidhi oo lagaga dhawaaqay safaaradda Gumaysiga ee London; “Iibsada Itoobiyanimada”. Intaas waxaa dheer oo lagu yidhi dadkii galay safaaradda gumaysiga London, haddaad doonaysaan inaad noqotaan Itoobiyaan waa inaad iibsataan warqadda Biya xidhka Abbay. Waxaa hubaal ah in kuwii sidaa ku iibsaday Itobiyaanimo ay sharaf dhac u keeneen magacii umadda Somaliyeed.
Maxaase isku xidhay warqad la iibsado iyo Itoobiyaanimada? Qawmiyadaha kale sidaa miyaa looga iibiyay warqaddan biya-xidheenka? Maxaa keenayse in Somalida laga iibiyo Itoobiyaanimada Maanta? Maxaa qofka Soomaaliga ah looga gadayaa Itoobiyaanimada? Shacabka Soomaalida Ogaadeeniya ma sidaa ayay ku noqonayaan Itoobiyaan? Mase u baahan yihiin inay gataan Itoobiyaanimada?
Shacabka Soomaalida Ogaadeeniya oon waligood laga maqlin Itoobiyaan ayaan ahayn oon waligood Itoobiya inteeda kale wax la wadaagin waxna la qaybsanin ayaa lagu yidhi iibsada Itobiyanimada. Itoobiya oon waligeed cid aan Axmaaro iyo Tigree ahayn aanay dhab ahaan u sheeganin. Labadaa qawmiyadood cid aan ahayna ma soo xukumin, waana labad qoomiyadood ee ka soo jeeda Kiniisada Orthodokiska ee Itoobiya katalisa waligeedna ka soo talin jirtay, ilaa Johannas, Minilikh, Minilikh II, Xaylesilaasi, Mingistu Xayle Maryam iyo kan hadda xukuma ee dhiigyacabka ah Meles Zinawi.
Arinta dhabta ah waxay tahay; gumeysiga Itoobiya waxaa la soo daristay dhaqaale xumo badan oo meelo badan ka soo wajahday, dhinacii kaalmada dibadda oo uu aad ugu tiirsana wadamo badan ayaa ka joojiyey qaar kalena way ka yareeyeen kaalmadii ay siin jireen Itoobiya. Akhri Dawladaha Midowga Yurub Waxay ku dhawaaqeen in ay ka fiirsanayaan dhamaanba kaalmadii ay siin jireen Itoobiya. Sicirbaraarka ayaa aad sare ugu kacay wadanka gudihiisa. Qiimaha lacagta Birrka ah ayaa aad hoos ugu dhacay. Badeecada wadanka soo gasha ayaa qiimo sare ku timaada madaama ayasan Itoobiya lahayn dekad ay wax kal soo degto. Xukuumada TPLF markay arkeen khatarta dhaqaale xumo ee ku soo food leh ayay waxay bilowday in ay tidhaahdo waxaan dadka ka iibinayaa warqado damaanad ah oo la yidhi waa Biyo xidheenka Abbay ee ku yaala Waqooyi Galbeed ee Itoobiya. Qofka Somaliga ah ee garanaya meeshaa waa kuma?
Ogaadeeniya sow ma maro labo wabi iyo Togag badan oo biyahooda ay ku shubmaan Bad-weynta Hindiya? Maxaa looga dhisi waayay biyo xidheeno iyo dhulbeereed ay dadku ku noolaadaan?
Ugu dambayntii; shacabka Soomaalida Ogaadeeniya waligiis Itoobiya kama mid noqon, kamana mid noqon doono. Taariikhda qoranna waxaa ku xardhan inuu gumeysigii Reer Yurub ee Afrika ku soo duulay gaar ahaan Ingriiska ay ku wareejiyeen 1948 – 1955 Itoobiya dhulka Soomaalida Ogaadeeniya ilaa iyo maantana halgan aan joogsan uu ka aloosn yahay dhulkaa ilaa ay Xoriyadooda helaana ay wadayaan.
ALI WADAAD says:
Waa Maqaal aad u qiimo badan Ogadennet way kumahadsanyihiin
Wali Jarareed says:
Waxaan aad ulayaabay damaca doqonka soo iib geeyey magaca Gumeysiga sii dhacaaya ee Itoobiya Qalbig ilhay kaa qaad ina Ilayow,
oGADEENIYA WAYXOOOOROOBI INSHAALAU WABIYADEENA AYAAN XIDHN DOONA